Non-discrimination Policy - Ibo (Igbo asusu) - Aging Life Care™ Management in [Your Service Area] - [Your Organization]
Non-discrimination Policy – Ibo (Igbo asusu)
Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call [Number for Language Assistance Service] (TTY: [Number for TTY Service]).
[Your Organization] iruwe isi na odabara goomentii etiti ruuru iwu nke na -adighikwa akpa oke na ndabere nke agburu, agba, obodo, afo, nkwaru, ma o bu mmekoahu. [Your Organization] adighi ewpu mmadu ma o bu na -emeso ha di iche iche nihi agburu, na agba, obodo, afo, nkwaru, ma o bu mmkoahu.
O burukwa na I chere na [Compliance Officer's Title and Name] a gbuola afo na ala n’ihe gbasara i chere na [Compliance Officer's Title and Name].
O burukwa na I chere na [Your Organization] a gbuola afo na ala n’ihe gbasara i nyere ndi n’o na mkpa aka, n’ihi ebe ha si, afo ole ha di, a gburu ha, colo aru ha, biko degara leta nye [Compliance Officer's Title and Name] [Your Address], [Compliance Phone Number], TTY: [Number for TTY Service], [Compliance Fax Number], [Compliance Officer's Email]. I nwekwara I ji aka gi degara ndi na achikota o gbako a ahwukwo na aka gi site na mailu, fax ma o bu Email. [Compliance Officer's Title and Name] nokwa mgbe o bula, nyere gi aka.
I nwekwa ike I degara akwuko uye ulo oru ndi U.S Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically site na office for Civil Right. Kwa ha mkpa gi site na https://ocroportal.hhs,gov/ocr/portal/lobby.jsf, ma o bu site na